The Best Electric skeidgareeyo Boorsooyinka Waayo Board Your - Jomo Technology Co., Ltd
Sida caadiga ah aadan rabin inaad qaadato skeidgareeyo korontada masaafo dheer by gacanta, iyo boorsada guddi ka dhigi kara inta badan ka sahlan in sidaas la sameeyo. Iyada oo boorsada board a, waxa kale oo aad dareemi kartaa lacag la'aan ah si ay u fuliyaan guddoonka in ay ka shaqeeyaan inta lagu jiro subax a roobaadka iyo weli waxaa kortaan dib marka ay sunnier fiidkii. Waxaa jira fursado dhowr ah boorsooyinka dhabarka lagu skeidgareeyo korontada ay qaban karaan + longboard 15 LB ah:
Burton Day tub-dheer aadeye 28L Pro
Mid ka mid ah si qarsoodi ah in maskaxda lagu hayo marka aad eegto, waayo, boorsada guddiga waa in boorsooyinka snowboard inta badan si fiican u shaqeeyaan. Burton, si fiican u yaqaan brand qalabka snowboard ah, uu leeyahay noocyo kala duwan oo boorsooyinka snowboard si fiican u shaqeeyaan. Maalinta tub-dheer aadeye 28L Pro waa hal tusaale oo kale, oo leh noocyo kala duwan oo midabo, qolka ku filan, waayo, waxyaabo kale oo la mid ah ilaalada curcurka iyo pads jilibka, iyo nidaam sidato guddiga toosan.
Koowheel Electric Longboard Bag waa fursad si caddaalad ah oo kala duwan oo caan ah si ay u fuliyaan labada joogto ah iyo longboards korontada . Anigu shakhsi ahaan aad ugu boorinayna this mid ka mid ah iyo sidoo kale in ay aad u soo dhaweeyay waxaa by macaamiisha ugu badan. Ka sokow, ay sabab u tahay soo socda Christmas, Koowheel Christmas 8600mAh (awood Double) badeli Battery Limited Edition E-guddiga waa on sale. Just kaliya 20 maalmood. Baahnayn in la sheego waa hibo gaar ah oo loogu talagalay macaamiisha cusub iyo wax duug ah.
Waxaad ka iibsan kartaa Koowheel Longboard iyo bac ku toosiyo ka website-ka.
Midnimada skeidgareeyo boorsada
The boorsada Midnimada skeidgareeyo waa ka duwan oo wax yar ka yar si bacaha weyn Burton iyo Dakine. Waxa ay taageertaa rullebrett ilaa 15 lbs, sidaa daraadeed waxa aan loogu tala galay u sameeyey looxyada culus sida baasaboorka xuubsiiban ku GT. Si kastaba ha ahaatee, looxyo sida aadayaan Board Dual + (2-dii Gen ) iman in ka yar xadka 15 LB ah, skeidgareeyo Enhedslisten boorsada shaqeyn doonaan oo kaliya ganaax.
Waayo, baasaboorka GT ama milkiilayaasha Carbon GT (ama, kuwa kibirka baasaboorka GTX adopters hore), xuubsiiban bixisaa boorsada dhabarka ku tilmaamay skeidgareeyo loogu talagalay in lagu qaban loox ay. Waxay leedahay astaamaha caadiga ah sida boorso dhalo biyo ah (in kastoo, iyagaa ku dahaaran yahay), iyo logos u milicsato si baabuurta waxaad ka arki kartaa habeenkii.
Waxaad si toos ah amri kartaa boorsada xuubsiiban ka dukaanka web ay.